मोबाइल हरायो ? अब चिन्ता नगर्नुस् ! आइसक्यो यस्तो प्रविधि – aajnepal
HomeRochakमोबाइल हरायो ? अब चिन्ता नगर्नुस् ! आइसक्यो यस्तो प्रविधि
मोबाइल हरायो ? अब चिन्ता नगर्नुस् ! आइसक्यो यस्तो प्रविधि
भादगाउँ, २३ माघ । मध्यपुर थिमि–१ लोकन्थली बस्ने अरविन्द आचार्यको सामसुङ ग्यालेक्सी जे फाइभ मोबाइल सेट सार्वजनिक यातायातमा बालकोटबाट कौशलटार आउने क्रममा हरायो । उहाँले महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिमा गत मङ्सिर २३ गते मोबाइल पाकेट मारेको भनी निवेदन दिनुभयो ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र ३५ वटा हराएका मोबाइल फेला पारी मोबाइल धनीलाई बुझाएको छ । वृत्तका अनुसार हप्तामा दुई/चार वटा मोबाइल हराएका निवेदन आउने गरेको छ ।
हराएकामध्ये महिनामा पाँच/सातवटा मोबाइल फेला पर्ने गरेको छ । प्रहरीले हराएको मोबाइलका सम्बन्धमा निवेदन लिनका लागि मोबाइल सेटको प्रकार र मोबाइल सेटमा हुने आइओएमआई नम्बरसहितको विवरण उल्लेख भएको निवेदनको ढाँचा नै तयार गरी लागू गरेको छ ।
मोवाइल हराएका घटना हेर्दा सामान्य देखिए पनि प्रहरीले त्यस्ता निवेदनको निरन्तर छानबिन र खोजी कार्य जारी राख्ने गरेको प्रनाउ पोखरेलले बताउनुभयो । “हेर्दा सामान्य देखिएपनि मोबाइल हराएको निवेदनमा प्रहरीले निरन्तर खोजी जारी राख्ने गरेको छ । त्यसैको परिणाम मोबाइल हराएको छ महीनापछि पनि फेला परेका उदाहरण छन्,” उहाँले भन्नुभयो । –रासस